एक कठिन विवाह मा अनुग्रह को लागी व्यक्तिगत प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना गाह्रो विवाहमा अनुग्रहको लागि व्यक्तिगत प्रार्थना
के तपाई कहिल्यै धेरै गाह्रो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईले त्यस अवधिमा कति निराशा, कटुता र पीडा सहनुपर्‍यो, हैन? यदि साधारण सम्बन्धको आघात यत्तिकै गम्भीर हुन सक्छ भने, गाह्रो वैवाहिक जीवनमा व्यक्तिगत अनुभव कत्तिको हुनेछ? जीवनको लागि सँगै बस्न पुरुष र महिलाको सँगै आउनु भनेको पक्कै पनि सुविधा र असुविधाको विवाह हो। त्यहाँ हाँसो, मुस्कानहरू, र कुनै पक्कै पनि चिच्याईने छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कि आकाश जतिसुकै सेता भए पनि, त्यहाँ अलि अन्धकार बादल हुनेछ जसले सेतो आकाशको विचित्रतालाई बाधक बनाउनेछ। यसको सीधा मतलब यो छ कि त्यहाँ कुनै विवाह छैन जहाँ त्यहाँ कुनै चुनौती छैन। यद्यपि, जब विवाहमा चुनौति र डरलाग्दो परिस्थिति खडा हुन्छ, हाम्रो जीवनको डरले सम्बन्धबाट टाढा बस्न यो होइन। हामी यसो भनिरहेका छैनौं कि यो हामी बस्नु राम्रो छ र विषाक्त सम्बन्धहरूले हामीलाई मार्न दिनुहोस्, म के भनिरहेछु भने हामीले हाम्रो हतियारको पूंजीकरण गर्नुपर्छ युद्ध जुन प्रार्थना हो। आज हामी गाह्रो विवाहमा अनुग्रहका लागि व्यक्तिगत प्रार्थनामा संलग्न हुनेछौं। जब तपाईं यी व्यक्तिगत प्रार्थनाहरूलाई विश्वासमा संलग्न गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको हात तपाईंको वैवाहिक जीवनमा स्थिर हुनेछ, र हरेक क्रोधित आँधी येशू ख्रीष्टको नाममा शान्त हुनेछ।
धेरै चोटि जब हामी चुनौतीहरूको सामना गर्दछौं, परमेश्वर आफैंले प्रयास गरिरहनु भएको हुन सक्छ। हामीलाई कठिन परिस्थितिबाट केहि सिकाउनको लागि, यो उचित छ कि अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्नु सधैं भगवान्को पाठ हो जुन परमेश्वरले हामीबाट सिकोस् भन्ने चाहनुहुन्न। सम्झनुहोस् जब परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनुभएको थियो, उहाँले तिनीहरूलाई उजाडस्थानमा लगनुभयो जहाँ खानेकुरा थिएन र उनीहरूले मन्न खुवाए। इस्रायलका मानिसहरूलाई धैर्यता, धैर्यता र नम्रता सिकाउनको निम्ति परमेश्वरले त्यो काम गर्नुभयो। त्यसकारण प्रत्येक नकारात्मक पक्षमा, हामी कठिन अवस्थाबाट द्रुत रूपमा बाहिर निस्कन कोशिस गर्दैछौं, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यसमा सम्मिलित भएको पाठलाई नबिर्सौं।
यसैले जब हामी एक धेरै गाह्रो विवाहमा हुन्छौं र यस्तो देखिन्छ कि शैतानले पहिले नै लडाई जितिरहेको छ र हाम्रो घरको एक पटक सुन्दर स्वर्गले बिस्तारै जीवित नरकमा परिणत गर्दैछ। त्यस समय भन्दा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने राम्रो समय अरू छैन। हुनसक्छ तपाईं प्रार्थना गर्न चाहानुहुन्छ तर तपाईं शब्दहरूको कम हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई प्रार्थनामा सही भन्नको लागि सही ज्ञान पनि छैन। कृपया तल केहि व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू पढ्नु पर्छ।
मेरो विवाहको लागि व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू
हे प्रभु, म तपाईको वैवाहिक जीवनमा निरन्तर कठिनाई ल्याउन चाहन्छु, यसले बिस्तारै मेरो शान्ति र आनन्द लुटिरहेको छ। म अब चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दिन, मेरो जीवन मेरो अप्ठ्यारो घरबाट चकनाचूर हुन्छ। मैले मेरो घरको परिस्थितिलाई बचाउन मैले सक्दो प्रयास गरें तर केहि काम गरेको छैन। म एक बिभिन्न विवाह सल्लाहकार भएको छु तर यस्तो लाग्छ कि उनीहरूसँग मेरो परिवारको समस्याको समाधान छैन। प्रभु, भारी हृदयले म तपाइँको मेरो विवाह को स्थिति लाई ल्याउन, म तपाइँलाई यस संग शान्त कुरा सोध्न। मेरो घरको क्रोधको आँधीबेहरी येशूमा तपाईंको शक्तिले रोक्न दिनुहोस्।
स्वर्गीय प्रभु, हृदयको तीतोपनाको साथ, म तपाईं कहाँ आएँ, मेरो घरको दुश्मनी अब चिन्ताजनक छ। एक समय मैले आनन्द लिने शान्ति र शान्ति अब विगतको कुरा भएको छ। मेरो पूरै घरको यो हालको समस्याको साथ खस्कँदै छ, प्रभु, कृपया आफ्नो कृपा द्वारा, मेरो घरको हरेक समस्याग्रस्त अवस्था विघटन गर्नुहोस्। धर्मशास्त्रले भन्छ, “जब परमप्रभुले सियोनको कैद फर्काउनुहुन्छ, हामी ती सपनाहरूजस्तै थियौं। हे प्रभु, तपाईंको कृपाको कारणले, म तपाईंलाई मेरो घरको शान्ति फिर्ता माग्दछु, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईंको दयाले मलाई फेरि खुशी पार्नुहोस्।
स्वर्गका राजा, म बिन्ती गर्दछु कि तपाईं हामीमा नयाँ हृदय सृजना गर्नुहोस् हे भगवान, हामीलाई ट्र्यास गर्न र हामी कहाँ गल्ती भएको हो पहिचान गर्न अनुग्रह दिनुहोस् किनकि सम्बन्ध कहिल्यै यसरी सुरु भएन। हामीलाई लुसिफरले हाम्रो बिरूद्धमा प्रयोग गरिरहेको लूपोलहरू चिन्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामीलाई संशोधन गर्न सहयोग गर्नुहोस् जुन हाम्रो घरको स्थितिलाई स्थिर बनाउँदछ।
हे प्रभु, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईंले मलाई कहिले व्यवहार गर्ने र प्रतिक्रिया देखाउने ज्ञान दिनुहोस्। मलाई जहिले पनि मलाई चाहिएको बेला मेरो शान्त रहन को अवसर प्रदान गर्नुहोस्, कहिले र कसरी बोल्ने र अनुमोदित हुनको लागि अनुग्रह। म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईं मेरो मुटु र ओठलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ कि मेरो मुटुबाट उदाएको सोचाइ पवित्र हुनेछ र मेरो बोली पवित्र र तपाईंलाई प्रभुमा खुशी पार्नेछ।
प्रभु, म शैतानले मेरो घरको पूर्ण कब्जा लिन चाहन्न, म मेरो घरको स्थिति लिन चाहन्छु। म स्वर्गको अधिकारबाट मेरो विवाहको गाह्रो परिस्थितिमा बोल्छु, यो विवाह प्रभुको हो, त्यसैले शैतानको कुनै खराबी, योजना वा योजनाले विजय गर्नु हुँदैन। म शैतानको बस्नको लागि मेरो विवाहलाई असहज बनाउँछु, म आदेश गर्छु कि सर्वशक्तिमान् भगवानको आगोले मेरो विवाह गर्छ र त्यसले मेरो घरलाई शैतानको लागि जल्दो भट्टीमा परिणत गर्दछ। येशूको नाममा, म शैतानको मेरो विवाह तोड्न को लागी योजनाहरु नष्ट गर्दछ, किनकि बाइबल भन्छ प्रभुले सँगै जोसेको छ कुनै मानिस वा केही नछोडोस्। प्रत्येक अन्य नाम माथि छ कि नाम मा, म शैतान मेरो विवाह मा आफ्नो पकड गुमाउन भनेर आदेश।
बुबा प्रभु, म तपाईलाई मेरो साथीलाई सँधै मलाई बुझ्न मद्दत गर्दछु जब म बोल्दछु म उहाँसँग अनुग्रह खोज्छु / उनी मलाई बुझ्दछन् जब म पर्याप्त छु कि तिनीहरूले मलाई बुझ्न सक्दछन्। म नयाँ प्रेमको लागि सोध्छु, प्रेम जुन गल्ती र त्रुटिहरू भन्दा परे देखा पर्दछ, प्रेमको प्रकार जुन हाम्रो मुटुमा पहिलो पटक भेट्छ, भेट्छु, ईश्वरले यो विवाहलाई हाम्रो विवाहमा फिर्ता फिर्ता ल्याउनुहोला।
र हामीलाई उत्पन्न हुन सक्ने हरेक परिस्थितिसँग डिल गर्न मद्दत गर्नुहोस्। चाहे यो पैसाको अभाव हो, हामीलाई पैसा आए सम्म सँगै सहन अनुग्रह दिनुहोस्। हामीलाई तपाईको वचनमा पूर्ण भरोसा राख्ने सुअवसर दिनुहोस् कि मेरो ईश्वर येशू ख्रीष्टमार्फत महिमाका सबै सम्पत्तिहरू अनुसार मेरो सबै आवश्यकताहरू पुर्‍याउनुहुनेछ। प्रभु, हामीलाई येशूको नाममा सबै अवस्था व्यवस्थापन गर्न अनुग्रह दिनुहोस्।
प्रभु, पृथ्वीमा हाम्रो बसोबास को अन्तमा, हामीलाई स्वर्गमा तपाईंसँग शासन गर्न मद्दत गर्नुहोस्, हामी येशूको घरमा मेरो घरको वर्तमान अवस्थाको साथ उच्च मा आफ्नो घर नष्ट नगर्नौं।
अघिल्लो लेखमाएक असफल सम्बन्ध बचत गर्न प्रार्थना
अर्को लेखमालागूपदार्थको दुर्व्यसनको लागि प्रार्थना
फ्रिडा फुर्ताद फेब्रुअरी २,, २०२० ११:२:14 अपराह्न
कृपया मेरो विवाहित छोराको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् जससँग धेरै दुर्गुणहरू छन् र जसले आफ्नो जीवन साथीहरू र आइमाईहरू र धूम्रपान र मदिरापान र महिलालाई दिएर बर्बाद गर्दैछ। उनकी श्रीमतीले आशा गरिरहेकी छिन् र धेरै दुखी छिन् र राम्ररी ठीक छैन। हामी धेरै दुखी छौं। हामी धेरै प्रार्थना गर्छौं तर कुनै कुराले उसलाई परिवर्तन गरेको देखिँदैन। उसले आफूले के गल्ती गरिरहेको छ भनेर स्वीकार्दैन र बुझ्दैन। कृपया हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी निष्कपट रूपमा प्रार्थना गर्दछौं। उसलाई सहयोग गर।
लुइस गार्सिया क्विन्टरो अप्रिल २,, २०१ At अपराह्न २::20
एस pomocou लॉर्ड्का zakuzu som bol schopný získať späť môjho bývalého milenca। व्हाट्सएप हो तेरा ना +१ 1०-740- 573 9483äťXNUMX,, अब स्ट स्ट सा डोस्टली स्पा।
मुक्ति को लागी प्रार्थना बिन्दुहरु
जबसम्म तपाईले मलाई प्रार्थना गर्नुहुन्न म तपाईलाई जान दिन सक्दिन।